Ahitana fanafody, vary, fitafiana, bodofotsy sy rano fisotro madio izany ary misy sambo kely 6 haingam-pandeha hizara amin’ireo faritra tena lasibatra. Tsy niandry ela izahay vao nandre ny antso avo nataon’ny fitondrana Malagasy, hoy izy satria efa lalim-paka ny fifandraisana ary mpifanolo-bodirindrina rahateo i India sy Madagasikara. Na izany aza dia miara-miasa tanteraka amin’ny Birao Nasionalin’ny Fitantanana ny Loza Ara-boajanahary (BNGRC) ireo solontena avy any India amin’ny fizarana ny fanampiana. Miisa 60 ireo olona avy any India miasa any Antsiranana ary misy dokotera sy ekipa medikaly maro. Nanararaotra nilaza ireo fiaraha-miasa misy amin’ny governemanta Malagasy ihany koa Atoa Abhay Kumar. Amin’izao fotoana izao dia hamafisina hatrany ny fiaraha-miasa satria amin’ny herinandro ho avy izao dia ho any India ny minisitry ny fiarovam-pirenena Malagasy hanatrika fampirantiana ary hihaona amin’ny minisitry ny fiarovam-pirenena Indiana. Fifanampiana ho fampandrosoana ara-toekarena hatrany no tanjona ary sehatra maro samihafa no hokitihana. Miezaka ny manakaiky ny firenena Malagasy amin’ny fomba rehetra i Inde araka ny tatitra omaly ihany. Andrasana ihany koa ny vokatry ny famatsiam-bola nampiroboroboana ny sehatra fambolena izay nanomezana 20 tapitrisa dolara .